Ịma Mma | Ka 2022
Kedu ka ọ na-adị anyị gbasara okooko osisi ntutu ụbọchị ndị a?
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ịma Mma
Ụdị okooko osisi nwere ifuru nwere ntakịrị afọ ole na ole gara aga mgbe kpakpando dị ka Katy Perry na Taylor Swift yi ha, mgbe ahụ ọ jiri nwayọ pụọ, dị ka usoro na-emekarị. Mana ahụrụ m mmadụ abụọ nwere ike ịnwa ịkpọghachite ha. Ị ga-aba n'ụgbọ ma ọ bụrụ na okooko osisi ntutu abata ọzọ na mberede?
Ngwaahịa Nlekọta Ncha Ọhụrụ kacha mma ịnwale na Jenụwarị 2019
Ngwa ahịa nlekọta anụ kacha ọhụrụ na-amalite na 2019, gụnyere mmalite sitere na Sunday Riley, Fresh, Kiehl's, na ndị ọzọ.
Otu esi adị ka Keri Russell, dị ka onye na -eme ntutu isi ya na onye na -ese etemeete si kwuo
N'ụzọ doro anya, enweghị m ike inyere gị aka ịdị ka Keri Russell, mana enwere m ike inyere gị aka idetuo egbugbere ọnụ na -enwu gbaa na ebili mmiri dị egwu ọ yi n'abalị ụnyaahụ na nyocha Austenland na New York City. Nke ahụ lipstick? Onye na -ese ihe nkiri Tina Turbow tweetedị na ọ bụ Marc Jacobs Lust for Lacquer na Boom Boom. Banyere ntutu isi, nke a bụ ihe onye na-edozi ntutu isi Brian Magallones kwuru na ọ malitere imepụta ya: 'Amalitere m site n'iji mgbanaka 1-1/4-inch wee kechie akụkụ anụ ọhịa 2 n'akụkụ gbọmgbọm ahụ, wee jiri flatiron dozie ala 3 sentimita asatọ nke ntutu isi ya iji mee ka ọ dị ọhụrụ ma na -adị ọkụ 'Mgbe ahụ ọ jiri Rene Furterer Modeling Paste mee ka ọ dị larịị n'ahịrị ntutu isi ya, Rene Furterer Vegetal Hairpray iji jigide ya ebe wee mechaa Rene Furterer Glossing Spray. Yabụ ebe ahụ ị nwere ya, ihe ndị bụ isi iji megharịa anya Keri Russell na-acha uhie uhie. Onye ga -anwale ya? Foto: Getty Images
M nwara ya na Tuesday: Blinged Out DIY Mani
Abụ m onye na -akerụ ara maka ntu ntu - nke pụtara na m na -eji mkpịsị aka ọ bụla na -ese agba dị iche tupu m apụ n'ọfịs. Nnwale nnwale ihe osise mkpịsị aka m kacha ọhụrụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke ejiri Sally Hansen's Collection Salon, ọkachasị ndo na -acha anụnụ anụnụ, Heartsapphire. Etu ị ga -esi lee anya ma wụlikwa elu ...
Nkuzi nkuzi nkuzi olu a na -aga n'ihu na Instagram
Contouring dị ebe niile, a na-ahụkwa oke mmeghachi omume azụ ya (anyị kpọrọ aha ịkpụ aka dị egwu otu n'ime usoro etemeete anyị ga-achọ iwepụ na 2016). Ugbu a, a na-ebugharị ya site na ihu gaa n'olu, na nkuzi nkuzi Instagram ọhụrụ nke na-agbasi ike nke etemeete iji nweta 'slimmer, amara mara mma.' A na -enweta ya n'otu ụzọ ahụ aghụghọ ọ bụla: na -egwu ọkụ na agba gbara ọchịchịrị megide ibe gị iji nye echiche omimi. Ma ọ bụ ezie na anyị na-enwe mmasị iji etemeete na-ekpori ndụ, mmetụta onye a na-adịtụ ntakịrị-anyị ga-echegbu onwe anyị n'ezie etu azụ azụ anyị si dị? Anyị enwere ike zuo ike wee mee ọmarịcha otu anyị? Onye na -ese etemeete Bobbi Brown nwere ike kwuo ya nke ọma mgbe o kwupụtara mkpebi ya na teknụzụ. 'Ọdịdị nke ihe a adịghị mma n'ihi na ọ na -agwa ụmụ nwanyị na ọ nwere ihe adịghị mma n'ihu ha,' ka ọ gwara New York Post ọdịda ikpeazụ. 'Enwere ịma mma na ihu zuru oke, yabụ na anaghị m amasị ese ihe na ntì nke na -adịghị.' Insta-hack mekwara ka a mara na ndị na-abụghị ọkachamara na-enwe mmetụta na ya. 'Olu m niile bụ eke. Mba, daalụ. Enweghị m obi iru ala, 'otu kwuru.
Iwu ọhụrụ 7 maka ịzụrụ mma
Kedu ka ndị ime ụlọ si azụ ahịa maka ihe dị mma.
Kedu ụdị mkpọtụ nke m ga -enweta maka nnukwu ihe omume n'abalị a? Votu!
Ọ bụ nnukwu ụbọchị ịgba gburugburu akụkụ ndị a. See hụrụ, anyị niile na -akwadebe maka nturu ugo nke ụmụ nwanyị nke afọ, ebe anyị na -eyi uwe niile ma sọpụrụ ụfọdụ ụmụ nwanyị dị ịtụnanya na -eme ụwa ihe ịtụnanya n'ezie. Echere m na ọ bụ ihe ngọpụ zuru oke ịhazi oge nleta mbụ m na New York nke Dry Bar, ụlọ nkwari akụ a ma ama $ 40, maka otu ọmarịcha mmụba ha. Nke na -ewetara m ajụjụ: kedu ụdị m ga -enweta?
Emma Chamberlain tụfuru usoro nlekọta akpụkpọ ahụ ya
Emma Chamberlain na Glamor na-ekerịta usoro nlekọta anụ ahụ ya, gụnyere mmanụ nke na-eme ka ị 'dị ka nwa amụrụ ọhụrụ.'
Yiri ihe nlereanya a Eyeshadow ụlọ ahịa ọgwụ $ 7-ọ bụghịkwa naanị n'anya ya (a na m anwale ya! Gị?)
Oge maka ihe nzuzo ọzọ mara mma site na azụ azụ na Oge Ejiji Ejiji 2013-ị ga-achọ ịgbakwunye nku anya ụlọ ahịa ọgwụ a na akpa nke aghụghọ aghụghọ.
2 Ezi ntutu ntutu dị mkpụmkpụ & nke na -adịchaghị mma n'anya ugbu a (zuru oke na agba ntutu mara mma n'ezie)
Ọ dị mma n'izu mkpụmkpụ ntutu, ọ bụrụ na ị jụọ m. Ụnyaahụ anyị nwere mmasị na ịkpụ ntutu isi Mena Suvari zuru oke, ma ugbu a, obere ntutu dị mkpirikpi abụọ na -adọrọ mmasị ka anyị kpaa.
Ihe 9 Achọrọ m ka m mara tupu ịgbanye ntutu isi
Na -eche maka ịgbanwe site na ntutu dị jụụ gaa na ntutu eke? Nke a bụ ndụmọdụ niile ịchọrọ ịma tupu ịgbanwere ntutu isi.
Liz Hernandez tụfuru usoro nlekọta anụ ahụ ya
Onye nchoputa ahụ dị oke egwu na-ekerịta nkà ihe ọmụma mara mma n'ime-yana ngwaahịa nke ndị enyi ya na-asị, 'Oh chi m, akpụkpọ gị na-enwu gbaa!'
M nwalere ya: Superglue dị ka ndozi maka mkpịsị aka aka gbawara agbawa
Naanị mgbe m chere na m ga-ewere ya nke ọma maka blọọgụ a-Monistat anti-chafing cream dị ka imi-pore-shrinker, onye ọ bụla? Pampers na-ehichapụ dị ka ndị na-ewepu etemeete?-Ekwesịrị m ịga nwalee ihe ọgụgụ a na-agụ cuckoo maka idozi mkpịsị aka m gbawara agbawa.
Otu aghụghọ etemeete nke ga-emelite ihe nlele cat-anya gị
Ee, ee, ị hụla nwamba ọ bụla na -ahụ ya - ị gafere ya. Ma ọ bụ otú ahụ ka ị chere. Nke a bụ ihe ọzọ mara mma na ya na Natasha Bedingfield nke na -enye ọdịdị ahụ ntakịrị ihe ọzọ.
Anyị nwalere ịgbatị ntutu a na -ama jijiji na ntutu ụmụ nwanyị isii
Kedu ihe kacha mma iji dozie ntutu? Ndị na -edozi ntutu na -adịghị emerụ ahụ siri ike ịchọta, mana ntutu ntutu a na -egbochi ndị ọzọ.
Grammys 2020: ntutu na etemeete kacha acha uhie uhie
Hụ ntutu kachasị mma na anya etemeete site na kapeeti uhie Grammys 2020. Anyị chịkọtara ọmarịcha ịma mma Grammys.
Cher Hair: Otu esi aga mara mma, kwụ ọtọ ma na -egbu maramara n'oge oyi a
Omume ịtụghari ọzọ anyị nwere obi ụtọ ịhụ ọzọ? Nke kwụ ọtọ, ntutu na -egbu maramara. Iri na asaa - izu oke n'ụdị!
Mgbanwe agba agba ntutu ọkacha mmasị anyị nke 2014
Ị maara ihe dị mfe karịa ịgafe onwe gị ịgbanye ụcha? Ịhụ ka o si arụ ọrụ maka ndị ọkacha mmasị gị.
Akaụntụ Instagram a na -akpụ isi ga -adọtị n'obi gị
Ị dịla njikere maka ngwongwo ụfọdụ na Fraịde a? Ọ dị mma, n'ihi na m sụrụ ngọngọ na akaụntụ Instagram Mark Bustos n'oge na -adịbeghị anya ma ga -ekerịta. N'agbata ịkpụ ntutu na ebe a na -ere ahịa na Manhattan, Bustos na -eji Insta ya edepụta ntutu isi ọ na -enye ndị na -enweghị ebe obibi wee were obere akụkọ kọwaa ya. Ọrụ a, nke Bustos malitere na enyi nwanyị nwanyị ya na Philippines na 2012, ebutela ndị mmadụ ọ bụghị naanị na New York City kamakwa na California, Jamaica na Costa Rica. 'Ahụmịhe a na -adị iche mgbe niile mana ọ na -adịkarị,' Mark gwara The Philippine Star. 'N'agbanyeghị akụkụ ụwa ị nọ na ya, mmadụ niile na -enwe mmasị inwe ntutu isi. Ọ bụ okomoko ama ama n'ụwa niile nke mmadụ niile na ụzọ ndụ niile nwere ike ịghọta. ' Maka ndị na-ajụ ịkpụ ntutu Mark, onye na-akpụ isi dị afọ 30 na-ahapụ ha obere ngwa gụnyere nsí ezé, nhicha eze, mmanya granola, na ụfọdụ nhicha. Gaa na akaụntụ Mark iji hụkwuo wee kesaa ndị enyi gị akụkọ a na -akpali akpali!
Ntọala kacha mma maka akpụkpọ akpọnwụ
Anyị jụrụ ndị na -ese etemeete ama ama ka ha kesaa ntọala kacha mma maka akpụkpọ akpọnwụ. Site na Chanel ruo Tarte ruo It Cosmetics, ebe a bụ nhọrọ 25 akwadoro.
kedu usoro nlekọta ahụike kacha mma maka nwanyị dị afọ 50
ihe ụmụ nwoke chọrọ na mmekọ nwoke na nwoke
ugboro ole mmewere grey nwere mmewere
agba ntutu na -ewu ewu ọdịda 2016
jessica lynch gbara akaebe na ọgbakọ ọgbakọ